၀နေလို့ ပိန်ချင်ပါတယ် . . . – Healthy Life Journal
၀နေလို့ ပိန်ချင်ပါတယ် . . .
မေး ။ လူတစ်ယောက် ပိန်ဖို့ရာမှာ ဘယ်လိုအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။
ပါမောက္ခဦးကိုကို(ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖြေ ။ လူတစ်ယောက် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေဖို့ရာအတွက် (၁) အစားအသောက်၊ (၂) လေ့ကျင့်ခန်း၊ (၃) အပြုအမူကုထုံး၊ (၄) ဆေးကုသမှု ဆိုတဲ့ အချက်လေးချက်ကို လိုက်နာရပါမယ်။
ပိန်ဖို့အတွက် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်လုံးဝမစားဘဲ လျှော့တဲ့နည်းဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တကယ်ထိရောက်ပေမယ့် လိုက်နာနိုင်တဲ့သူ မရှိတဲ့အတွက် မအောင်မြင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် နည်းနည်း၊ အဆီနည်းနည်း အစာ (Low Carbohydrate,Low Fat)ကို စားတာက အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဆိုရင် တစ်နေ့ ၁၅၀ဝ ကယ်လိုရီ၊ အမျိုး သမီးဆိုရင် တစ်နေ့ ၁၂၀ဝ ကယ်လိုရီထက် ပိုမစားသင့်ပါဘူး။ မြန်မြန် ပိန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေ့ ကယ်လိုရီ ၈၀ဝ အောက်ပဲ စားသင့်ပါတယ်။ အရွက်များများ၊ အသားများများ၊ အဆီနဲ့ ထမင်း နည်းနည်းစားရပါမယ်။ မနက်စာကို မစားဘဲ မနေပါနဲ့။ မနက်စာမစားတဲ့သူတွေက တစ်နေ့လုံး ပိုစားဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သရေစာတွေကို ရှောင်ရပါမယ်။ သရေစာအနေနဲ့ စားချင်ရင် အရွက်သုပ်၊ အသီးစတာတွေကို စားပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆီကို နည်းနည်းစားရင်တော့ရပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ဆီကို ရှောင်ပြီး အပင်ထွက်ဆီကို စားပေးရပါမယ်။
အစားအသောက်စားတဲ့အခါ စားတဲ့ ပမာဏကို လျှော့ရပါမယ်။ ကြေးအိုးပွဲကြီး စားနေကျဆိုရင် ပွဲသေးပြောင်းစားတာ၊ ထမင်းကို စားနေကျထက် နှစ်လုတ်၊ သုံးလုတ်လျှော့စားတာ၊ အချိုရည် လျှော့သောက်တာတို့ကိုလိုက်နာရပါမယ်။ အပြင်စာကို မစားပါနဲ့။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံတွေကို စားပါ။ အဓိကက ဘယ်နှစ်လအတွင်း ဘယ်လောက် ပိန်အောင် လျှော့ချမယ်ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ချမှတ်ထားရပါမယ်။ တစ်ပတ်တစ်ခါ ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းလိုက် လို့ တစ်ပတ်မှာ ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ပေါင်ကျရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ခြောက်လကြာလို့ ၂၄ ပေါင် ကျသွားရင် အောင်မြင်ပါတယ်။
Related Items:Fat, obesity, thin